KACSANAANTA DARYEELKA DAHLIA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Ma aha wax for beertu waxay jecel yihiin in ay dhirta dahlias ku beeraan ubax, maxaa yeelay ubaxyadaasi waxay leeyihiin tiro aan la qiyaasi karin oo kala duwan. Noocyada kala duwan ee dahlias waxay ku kala duwan yihiin xuduudaha: dhererka dhererka, xajmiga iyo qaabka burooyinkeeda, habaynta xayawaanka, xaaladaha koritaanka iyo daryeelka, iyo midabka midabka.
Wax yar oo ku saabsan midabada deyrta
Magaca labaad ee ubaxa waa Dahlia, labadaba waxaa bixiya magacyada botanistaha: I. Georgi iyo A. Dahl. Dahlias waxay ka tirsan tahay reerka Astrov, wadamada Koonfurta Ameerika waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin goobaha ubaxa.
Ma taqaanaa? Qabaa'ilka Mayan kahor intaanay cibaadada qotomintooda ku qurxin jireen macbudyadooda dahlias. Aztec qabsaday dahlias sida dhirta daawooyinka iyo isticmaalka cunto. Indiya waxay u aragtay ubaxyadan inay yihiin ilaahyo ilaahyo, hadiyado qorrax ah oo ay caabudi jireen.
Waa wax aan macquul aheyn in la sheego dhammaan noocyada kala duwan - waxaa jira in ka badan toban kun oo iyaga ka mid ah, laakiin erayo yar ayaa laga yiraahdaa kuwa ugu caansan. Inflorescences ee dahlias waxay noqon kartaa mid weyn ama mid yar.
Tentishadu waxay leeyihiin qaabab kala duwan iyo midabyo. Dhirta dahsoon ee cucusta waxay u egyihiin cirbado qaro weyn, sida dhuunta tuubada.
Dahlias Spherical waxaa lagu kala soocay inflorescences terry oo leh dhirbaaxo dhoobo ah oo la isku qurxiyo foomka kubadda. Pomponum dahlias u egtahay noocyada hore, laakiin yar yar ee size.
Noocyo kala duwan oo dahlias ah ayaa soo jiidanaya, nidaamka midabkuna wuxuu soo jiitaa qaansoroobka - tones iyo sino badan oo ka mid ah midabada royal ah ee runta ah.
Sida loo dhiso dahlias
Dhammaan noocyada carrada waxay ku haboon yihiin dhirta xaaladaha bacriminta, xakamaynta iyo awooda qoyaanka. Laguma talinayo in lagu beero meel u dhow biyaha dhulka - dahlias ma aqbalaan qoyaan xad dhaaf ah.
Waa wax aan loo baahnayn in lagu beero soo socda geedo leh nidaam xidid adag, maadaama ay jiidayaan dhammaan nafaqooyinka ka soo baxa ciidda. Ciidda dahlias waa la diyaariyaa, la socoshada qiyaasta qiyaasta ah: isdabajooga humus, qanjaruufo cuntada lafaha, lime yar oo lakulma. Ka hor inta aan la beeri, god oo ah 30x30 cm oo cabbirka ayaa buuxsamay ilaa kala badh tan isku dhafan.
Shuruudaha beerto ee dhul furan
Tobanka sano ee labaad ee May, digriiga indhaha waxaa lagu beeray. Abuuraan geedo - horraantii Juun, marka dhaxan waa laga reebay.
Xulashada goobta iyo diyaarinta ciidda
Muuqaal cadaan ah, furan iyo meel qorrax leh - Tani waa meesha aad ka dhigi karto dahlias. Looma baahna in la beero meel u dhow deyrka sare iyo derbiyada, oo ku dhow dhirta ama dhirta sare leh: hoosku uma oggolaan doono dahlias inay si buuxda u koraan oo u cararaan.
Ka hor inta beerashada ubaxyada, dhulka waa in si wanaagsan loo daboolaa loona rusheeyaa cuntada lafaha. Si looga hortago dulin-biyoodka oo waxyeeleeya xididdada, waxaad ka dhigi kartaa sunta cayayaanka ee carrada. Haddii dhirta jirran ay sii koraan ka hor dahlias, daawee carrada leh formalin ama copper sulfate.
Diyaarinta digriiga beeritaanka
Tuber qiyaastii ah ayaa la dhigay meel hoose ee fossa, oo leh soodhaweyn ilaa kor. Waxay ku seexanayaan ciidda, wayna biyahaan, iyo sida ay u koraan waxay ku rusheeyeen dhulka si ay ugu daboolaan. Digriiga leh sprouts ka hor beerto waa si fiican u waraabiyey, sidaa darteed ciidda on xididdadiisa ayaa la lumped, ka dibna waxaa la beeray leh ciidda god.
Sida loo daryeelo dahlias ee dalka
Daryeelka dahlias ma aha wax ka duwan daryeelidda dhirta kale ee ornamental: dareenka, waraabinta wakhtiga iyo bacariminta, nadiifinta cawska oo farageliya koritaanka habboon iyo nafaqada.
Xilliga cimilada kulul, ubaxa waxay u baahan yihiin in la waraabiyo maalin kasta, dhammaadka xilli-kulaylka waa la dhimay. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku buufiso dahlias fiidkii iyada oo biyo la dejiyey heerkulka qolka. Inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon, waxaa lagu talinayaa in lagu xiro dahlias si aanay u jebin miisaankooda.
Si dahlias si fiican u koraan iyo ubaxyada ugu weyn, waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo ugu yaraan saddex jeer muddada xagaaga ah oo leh Bacriminta organic. Waxay noqon kartaa lo'da lo'da ama shimbirta lagu qasi karo biyo. Inta lagu jiro muddada ubax laba goor bishii, ubaxa waxaa lagu bacrimiyay dhirta iyo xalalka fosfooraska.
Kadib walbaha waraabinta waxaa lagama maarmaan ah in la daboolo ciidda, iyada oo loo raaco oksijiinka. Ka dib markii formation of dahlia ku hari, ciidda ku hareereysan xididada waa mulched leh humus ama peat.
Waa muhiim! Si burooyinkeeda ay u garaacaan lakabyo badan oo dhoobo ah, waxaad u baahan tahay inaad soo saarto caleemaha hoose inta lagu jiro koritaanka dahlias. Samee habka pasynkovaya ka hor inta aan la qabin burooyinkeeda.
Caleemaha yaryar ama liita ayaa laga saaraa, oo mid ama laba mid caafimaad qaba mid ka baxsan saddexda burooyinkeeda ee ku jira inflorescence. Bloring inflorescences ayaa sidoo kale laga saaraa si aysan dib u dhigin horumarinta burooyinkeeda.
Daraasadku waa qasab - in laga saaro haramaha ayaa ka hortagaya cudurrada iyo nafaqada. Xilliga abaarta, waa suurad wacan in ay ku dhuftanto dhirta, sidaas darteed qoyaanka sii dheeraan doonaa.
Digista iyo kaydinta dahlia xididka jiilaalka
Waxaa habboon in la ogaado sida iyo waqtiga ay tahay in laga saaro dahlias for kaydinta jiilaalka. Waqtiga qashinka wuxuu ku xiran yahay cimilada aaggaaga, badanaa bilowga ama dhammaadka Oktoobar, kahor bilawga ah ee dhaxan daran.
Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo afargeeska dhirta oo leh halbeeg, oo ka tegaya 15 cm. Si taxaddar leh u qodo si aan u dhaawacin xididada. Tusaale ahaan, riwaayado, samaynta qotomaal dhinacyo badan. Iska ilaali laba toddobaad meel qabow, ka dibna ku rid sanduuqyada, daboolo ciid iyo peat oo ku kaydi meel maqaad ah.
Waqti ka waqti waa muhiim in la hubiyo in xididada aaney jiraneyn, haddii ay qalalan yihiin iyo in kale. Haddii xididdadu qallajiyaan, waxaad ku yar kartaa iyaga biyo.
Digniin! Ka hor intaadan ka tegin digriiga loogu talagalay kaydinta Maqsin, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo xalka lime ama dambaska cudurada.
Qaababka Dheefaha Dahlia
Si aad u hesho geedka, ubax, warshad caafimaad leh, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo dhiso dahlias si sax ah. Xeerka ugu muhiimsani waa tayada iyo caafimaadka wax soo saar. Dhirta tuber waa inay leeyihiin sprouts xoog leh, iyo gooyn waa inay leeyihiin xididada yaryar iyo caleemaha.
Qaybta asaasiga ah
Ma jiraan wax cunto ah oo culus oo dahlias ka soo baxa digriiga. Guga, indhaha ayaa ka muuqda digriiga dahlia, sida baradhada. Waqtigaan, waxaad kala qaybin kartaa digriiga, iyaga oo qallajin kara nus maalin.
Digriiga qaybsan waxaa lagu beeray sanduuqyada seedling ee carrada qoyan. Ka tag tubbada qoorta furan. Heerkulka kaydinta waa inuu ahaadaa ugu yaraan 15°C. Markaad waraabiso, waa lagama maarmaan inaadan gooyin qoorta. Waqtiga marka dahlias lagu beeray xilliga gu'ga ee dhulka waa bisha Maajo.
Goynta waxaa lagu fuliyaa bartamaha jiilaalka. Si aad u bilowdo, Gagaashka digriiga, ka dibna ka gooyay iyaga koray ilaa 7 cm sprouts leh gabal ka mid ah collar xididka. Sand waxaa lagu shubay dherigii loo doortay ee jarista.
Waxaad samayn kartaa talooyinka goynta "Kornovin", ka dibna ku beer dheriga, si joogto ah biyaha iyo hawada. Marka guntooda Gagaashan, waxaad iyaga ku beeran kartaa dhul furan.
Ma taqaanaa? Marka la jarayo dahlia ee gooyaa, caleemaha soo muuqda. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho wax beerto ilaa saddex jeer.
Kobcinta dahlias laga bilaabo abuurka
Habka tarankan loo isticmaalo ee dahlias sanadle ah iyo mid aan labanlaab ahayn, iyo sidoo kale for taranta noocyo cusub. Iyada oo habka abuurka, dahlias inta badan lumiyo sifooyinka tayada ee kala duwan, waxay badanaa xanuunsadaan. Haddii aad go'aansato in ay dacaayad dahlias leh abuur, waxaa lagu beeray karaa labada dhulka iyo bokisyada for geedo xilliga qaboobaha.
Cudurada iyo cayayaanka dahlias, iyaga oo la dagaallama
Dahlias waxay u nugul yihiin cuduro badan: fayras, bakteeriyo iyo fungal. Marka caabuqa jeex jaalaha ah talooyinka caleemaha waxaa lagu qurxiyey iyadoo siddooyin huruud ah iyo xariiqyo.
Buro kala duwan goobaha iftiinka cagaaran ee dhexda caleemaha, halka caleemaha u dhinta. Mosaic Virus caleemaha caleemaha. Geedku wuxuu u koraa si liidata iyo ubaxyada, laga bilaabo baadiyaha caadiga ah waxay noqotaa cilad. Oak mosaic oo lagu gartey jaantusyo ciriiri ah oo ku saabsan caleemaha caleemaha geedkii. Nasiib darro, warshadda soo qabatay fayruusku waxay u baahan tahay in la baabi'iyo, iyo qalabkii aad ka shaqeysey waa in si fiican loo nadiifiyo, sida dhulka.
Kansarka kansarka iyo kansarka maqaarka. Xaaladda kowaad, koritaanka waxaa lagu sameeyaa nidaamka xididka geedka. Roots jeermiska iyo carqaladeeya ciidda ku xeeran, bakteeriyada cudur keena waxay ku sii jirtaa ciidda illaa shan sano. Kiis labaad wuxuu calaamad u yahay muuqaalka muuqaalka hababka burushka cagaaran. Cuduradan, dhirta ayaa sidoo kale la burburiyaa.
Cudurada si ay ula dagaallamaan: verticillosis, xajin, madow, xoqin iyo xoqin. Calaamadaha cudurradan: mugdi madow, oo leh stem thermed (lugta madowhurdo iyo rajo dareen ah (verticillosis), hurdi iyo jilicsanaan (kalluun cad) caddaan cad (xayrta maqaarka).
Waxaa lagu buufin leh caarad, dhirta waa in la buufiyaa iyadoo la diyaariyo daawooyinka ay ku jiraan bakteeriyada, kuna celi qalliinka kadib laba toddobaad. Xaaladaha kale, meelaha ay saameeyeen ee dhirta ayaa la gooyaa, inta soo hartayna waxaa lagu daaweeyaa daawooyin kala duwan oo laga iibsan karo dukaanka ubaxa.
Kabaha cayayaanka ee weerarta dahlias: aphids, thrips, qashinka, siriyeyaasha, nematodes. Haddii ay muuqdaan, ku buufin warshadda xalka chlorophos, iyo tubaakada tubaakada waxaa loo isticmaali karaa ka hortaga aphids.
Wireworm, gaar ahaan dirxiga, iyo sidoo kale daasadda kaabajka, nematodes iyo qoryaha loo baahan yahay in la goosto, ka dibna biyaha warshad leh karbofos.
Dahlias oo ku yaal boggaaga ayaa abuuri doona palette midab gaar ah. Dhirta Kuwani waxay ku fiican yihiin iyo naftooda, iyo isku dhafka ku xoortay geedo kale oo ornamental iyo ubax. Dhamaantood waxay u baahan yihiin daryeel iyo daryeel wakhti ah.